Nke na otu onye bụ nri polishing igwe gị
Nke na otu onye bụ nri polishing igwe gị? N'oge a, e nwere ọtụtụ ụdị igwe na-egbu polishing n'ahịa, mana ha nwere ike kewaa ụzọ atọ, nke bụ polisher rotary, polisher dual-action, na polisher rotation da polisher. A rotary polisher bụ a polishing igwe t ...
Gịnị bụ ihe dị iche na abụọ edinam polisher na rotary polisher? A bịa n ’ịhọrọ igwe na-ehicha igwe, otu n’ime ajụjụ ndị ahịa anyị na-ajụkarị bụ:“ Gịnị bụ ihe dị iche n ’ime polis na-arụ ọrụ abuo na onye na-eme ya?” Ọ bụ ezigbo ajụjụ na maka ...
You maara n'ezie ihe eji arụ ọrụ ụgbọ ala
1.What bụ ihe eji arụ ọrụ ụgbọ ala abụọ? Ejiri ihe eji eme ihe eji eme ihe site na mmeghari isi. Ọ na-atụgharị n'elu spindle dị n'etiti, spindle a na-agbagharị gburugburu eccentric offset. Ezigbo ihe atụ maka ihe eji eme ihe eji eme ihe bụ gburugburu ụwa. Ala n'onwe ya na-atụgharị na ya als ...